I-eVisa yaseTaiwan | IVisa eTaiwan kwi-Intanethi | natvisa.com
Isicelo saseTaiwan Visa kwi-Intanethi
URhulumente waseTaiwan wazise inkqubo ye-visa ekhompyutheni apho abemi bamazwe ahlukeneyo banokufumana i-visa yabo kwi-intanethi. Ngale nkqubo intsha ikhoyo, ukufumana uxwebhu lokuhamba oluya eTaiwan kube lula kakhulu. Ngenxa yokufika kwesibetho se-COVID-19, umhambi uya kufuna ukufumana uxwebhu lweSibhengezo seMpilo. Nangona oku kungathathi indawo ye-visa, nangona kunjalo, ukusilela ukufumana olu xwebhu kuya kumisa iindwendwe ekungeneni eTaiwan. Zombini, i-visa kunye nesibhengezo sezempilo sinokufumaneka kwi-intanethi, esenza ukuba yonke le nkqubo ingabinasiphako kuye wonke umntu oceba uhambo oluya eTaiwan.
Iindidi zeVisa zaseTaiwan
eVisa Imeyli 90 Days Ukufikelela kwiintsuku ezingama-30 enye Faka isicelo ngoku
Ukufaka isicelo kwi-intanethi ye-visa yaseTaiwan, abafaki-zicelo kufuneka babonelele ngepasipoti yabo esebenzayo. Kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu. Emva kokuqhubekeka kwe-visa, abahambi baya kuvunyelwa ukuba bangene kwilizwe elinye.
Abantu abafaka isicelo se-visa kwi-intanethi kufuneka benze i-imeyile. Oku kubaluleke kakhulu njengoko abafaki zicelo baya kuthi banikwe isaziso malunga ne-eVisa yabo kule id ye-imeyile. Xa isicelo se-visa senziwa, i-eVisa eya eTaiwan kunye noxwebhu lwesibhengezo sempilo ziya kuthunyelwa kwi-imeyile efanayo.
Isibhengezo sezeMpilo kunye ne-eVisa evunyiweyo
Abafaki-zicelo bayacelwa ukuba bangenise i-eVisa yabo evunyiweyo kwaye eprintiweyo kunye noxwebhu lweSibhengezo seMpilo kwigosa lezokufuduka.
Ukugcina ubhubhane oqhubekayo we-COVID 19 ngokwembono, iindwendwe zangaphandle kufuneka ziveze uxwebhu lweSibhengezo seMpilo, olu xwebhu luya kunceda ukumisela imeko yezempilo yabahambi kwaye babone ukuba bakulungele na ukungena kwilizwe.
Ukufika kwabo eTaiwan, iindwendwe kufuneka ziveze ipasipoti yazo ngokusemthethweni kweenyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Iinkcukacha zeVisa yaseTaiwan
Yintoni iVisa yaseTaiwan kunye noXwebhu lweSibhengezo seMpilo?
IVisa yaseTaiwan luxwebhu lokuhamba olubalulekileyo ekufuneka iindwendwe ezivela kumazwe angaphandle zifumane ukungena kweli lizwe. Ngelixa olu luxwebhu olubaluleke kakhulu, ukulufumana kunokuba yinkqubo ende kunye nobunzima. Ukusuka ekulungiseni i-aphoyintimenti kunye ne-embassy ukuya kuma kwimigca emide ukuqhubekeka nefom yesicelo, yonke inkqubo inokuthatha ixesha elininzi. Ke ngoko, ukwenza le nkqubo ibe lula kubakhenkethi, uRhulumente waseTaiwan wazise inkqubo ye-elektroniki yokufumana i-visa apho, undwendwe lunokufaka isicelo se-visa kwaye luyifumane kwi-Intanethi.
Ukusasazeka okukhawulezayo kwentsholongwane i-COVID-19 kukhokelele kuxwebhu olongezelelekileyo ekufuneka abantu belufumene ukuze bangene eTaiwan.Lolu luxwebhu lweSibhengezo seMpilo. Olu xwebhu lunceda abasemagunyeni ukumisela imeko yezempilo yomenzi-sicelo nokuba bakulungele na ukungena kweli lizwe. Olu xwebhu aluyiyo indlela yokutshintsha i-visa. Nangona kunjalo, ngelixa abantu bezizwe ezithile banokungena kweli lizwe ngoxwebhu lweSibhengezo sezoNyango; abanye banokufumana kunye nevisa.
Ungasifaka njani isicelo seVisa yaseTaiwan kwi-Intanethi kunye noXwebhu lweSibhengezo seMpilo?
Inkqubo yesicelo se-visa yaseTaiwan inokwenziwa kwi-Intanethi kwaye ngaphakathi kwamanyathelo ama-3, abafaki-zicelo banokugqibezela inkqubo yabo yokwenza isicelo sevisa. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba onke amanyathelo alandelwa ngokuchanekileyo:
Gcwalisa ifom yesicelo: Into yokuqala ekufuneka ayenze umenzi-sicelo kukubeka izandla kwifomu yesicelo sevisa, ekulula kakhulu. Le fomu iyafumaneka kwiwebhusayithi karhulumente. Abafakizicelo kufuneka kuphela ukuba bayikhuphele kwiwebhusayithi, bayigcwalise kwaye bayingenise kwi-intanethi.
Ukungeniswa koxwebhu: Emva kokuba ifom yesicelo se-visa igqityiwe, abafaki-zicelo kufuneka bazilungiselele amaxwebhu afunekayo. La maxwebhu kufuneka aqwalaselwe ngokufanelekileyo aze ke athunyelwe nefom yesicelo se-eVisa. Kwi-eVisa yaseTaiwan, abafaki zicelo bafuna kuphela ikopi ekhutshiweyo yepasipoti yabo.
Yenza Intlawulo: Okokugqibela, emva kokungenisa ifom yesicelo kunye namaxwebhu, abafaki-zicelo kufuneka baqhubeke nokuhlawula umrhumo wevisa. Ikhredithi esebenzayo okanye ikhadi lebhanki linokusetyenziselwa ukugqiba le nkqubo ngempumelelo.
Ungasifaka njani isicelo soXwebhu lweSibhengezo seMpilo?
Ukufaka isicelo soXwebhu lweSibhengezo seMpilo kulula kakhulu kwaye kunokwenziwa kwi-Intanethi. Abafakizicelo abadingi naluphi na uxwebhu lokugcwalisa ifom. Kuya kufuneka bazalise isicelo kuphela kwaye babonelele ngeenkcukacha ezinje ngolwazi lwempilo, imbali yokuhamba, iinkcukacha zendawo yokuhlala ngenqwelomoya njl
Imiyalelo yabahambi, ukufaka isicelo seVisa eya eTaiwan
Iindwendwe ezihambela eTaiwan kufuneka zibe noxwebhu lweSibhengezo seMpilo. Oku kufuneka kuhanjiswe kubasebenzi beenqwelomoya abaza kuhamba nabo.
Abantu bakwiiPhilippines banokuya eTaiwan ngaphandle kwama-visa ukuba banamaxwebhu akhutshwe yi-ROC (iTaiwan), i-US, i-UK, nawaphi na amazwe aseSchengen, e-Australia, eNew Zealand, eCanada, Korea naseJapan. La maxwebhu, ngumhlali osebenzayo okanye ikhadi elihlala ngokusisigxina, i-visa yokungena (ifakiwe i-visa ye-elektroniki); okanye (3) ikhadi lokuhlala okanye ivisa ephelelwe lixesha elingaphantsi kweminyaka eli-10 ngaphambi kokufika eTaiwan.
Loluphi uxwebhu lokuhamba endilufunayo ukungena eTaiwan?
Ngenxa yobhubhane obangelwe yi-COVID-19, abahambi bamanye amazwe abatyelele eTaiwan kufuneka babenexwebhu lweSibhengezo seMpilo. Abahambi bamanye amazwe baya kudinga zombini, uxwebhu lweSibhengezo seMpilo kunye ne-eVisa.
Zingaphi iintsuku i-eVisa yaseTaiwan isebenza?
I-eVisa yaseTaiwan isebenza iintsuku ezingama-90 emva kokuba inikiwe.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka abonelelwe nefom yesicelo se-eVisa?
Umfaki-sicelo kufuneka anikezele kuphela ipasipoti yabo efanelekileyo yenkqubo yesicelo se-visa.
Zeziphi iintlobo zamaxwebhu ekufuneka zinikezelwe xa kufikwa eTaiwan?
Ukufika kwabo eTaiwan, iindwendwe kufuneka ziveze i-eVisa yazo evunyiweyo (esekwe kubuzwe), uxwebhu lweSibhengezo seMpilo kunye noxwebhu lokuhamba.
Ndidinga ukufumana ifom yeSibhengezo seMpilo, ngalo lonke ixesha ndindwendwela iTaiwan?
Ewe, abahambi kufuneka bagcwalise le fomu, ngalo lonke ixesha betyelele ilizwe.
Mangaphi amangenelo avumelekileyo kumhambi one-eVisa yaseTaiwan?
Abahambi baya kuvunyelwa ukuba bangene kunye ne-eVisa yabo evunyiweyo eTaiwan.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ipasipoti izalisekise ngaphambi kokufaka isicelo se-eVisa yaseTaiwan?
Bonke abafaki-zicelo kufuneka babe nepasipoti enobunyani beenyanga ezi-6 okanye nangaphezulu zokufaka isicelo se-Taiwan eVisa
Yeyiphi indlela yokubhatala ekhoyo yokuhlawula i-eVisa?
Abafakizicelo banokusebenzisa ikhadi labo elisebenzayo okanye ikhadi ledebh ukugqibezela inkqubo yentlawulo.
Baza kulufumana njani ulwazi malunga nevisa yabo?
Abafakizicelo baya kuthunyelwa uhlaziyo kunye nokwaziswa malunga nenqanaba le-visa yabo kwi-imeyile yabo ye-Id.
Baza kuyifumana phi abafaki-zicelo i-visa kunye noXwebhu lweSibhengezo seMpilo?
Zombini i-eVisa kunye noXwebhu lweSibhengezo seMpilo ziya kuthunyelwa nge-imeyile kwi-ID ye-imeyile.